‘आफ्नो पनको चलचित्र निर्माणमा जोड दिनुपर्छ’
नेपाली चलचित्र निर्देशकीय क्षेत्रमा आफुलाई अब्बल स्थानमा उभ्याउन सक्षम निर्देशक हुन् मदन घिमिरे । कहिले गीति सिर्जना त कहिले पत्रकारिताको अनुभव संगाल्दै आज यो उचाइमा पुग्न सफल ब्यक्तित्व मदन घिमिरेको जन्म २०२२ सालमा भएको हो । २०४४ तिर निर्माण भएको चलचित्र ‘भाग्यरेखा’बाट निर्देशकीय यात्रा शुरु गरेका घिमिरेले आमाको मायाँ, घरसंसार, मायाँ नमार, दादागिरी, दोश्ती, बुवा आमा, ब्वाई फ्रेण्ड, काउसो लगायत ३० ओटा चलचित्र निर्देशन गरिसकेका छन् भने केही टेलिचलचित्र पनि निर्देशन गरेका छन् । समाजसेवामा पनि त्यतिकै सक्रिय रहने र पछिल्लो समय चलचित्र ‘आँधी तुफान २’को निर्देशनमा ब्यस्त रहेका बेला एक्कसी निषेधाज्ञा जारी भएलगतै सुटिङ स्थगित गरी कोभिडका कारण अप्ठेरोमा परेकाहरुको सेवामा जुटिरहेका वरिष्ठ निर्देशक मदन घिमिरेसँग मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :
समयको सदुपयोग कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
समयको सदुपयोग केही राम्रा पुस्तकहरुको अध्यायन, रमाईला कार्यक्रम हलिउड, बलिउड र कलियुगका चलचित्र हेरेर भैरहेको छ । केही सृर्जनात्मक काम गर्दै साथी भाइहरुसँग कुराकानी ग¥यो समाचार सुन्यो अनि घरका घरासी काम काज गर्दै फेशबुक चलाउँदै बितिरहेको छ ।
सुटिङ भैरहेको फिल्म ‘आँधी तुफान २’ निषेधाज्ञाको कारण रोक्नु पर्दा कस्तो लागिरहेको छ ?
‘आँधी तुफान २’ एउटा फ्लोमा काम भैरहेको थियो चलचित्र रोकिदा नरमाइलो लागि रहेको छ ।
पछिल्लो अवस्थाले गर्दा नेपाली चलचित्रको भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ?
नेपाली चलचित्र उद्योगको भविष्य विस्तारै राम्रो भैसकेको थियो । कोभिड १९ कोरोनाको पहिलो चरण र दोश्रो चरणले गर्दा नेपाली चलचित्र उद्योगको ठुलो लगानी फसेको छ । यो नेपाली चलचित्र उद्योगको भबिष्य ठीकठाक हुन अझै केही समय लाग्छ ।
प्रविधिको विकाससँगै आफुले चाहेको मनोरञ्जन हातैमा उपलब्ध हुने अवस्था छ दर्शकलाई सिनेमा हल प्रति आकर्षित गर्न के गर्नुपर्ला ?
दर्शकलाई आकर्षित र चलचित्र भवनसम्म डोर्‍याउन पक्कै पनि विषय वस्तु, गीतसंगीत, लोकेशन , ड्रेशअप, प्रस्तुतिकरण, कलाकारदेखि यावत कुरामा नयाँ तवर र दर्शकको खोज र सोच अनुसार नेपाली पनकै चलचित्रहरुमा जोड दिनु जरुरी छ ।
फिल्ममा लगानी गरेर मुनाफा कमाउने सम्भावना देख्नु हुन्छ ?
मैले निर्देशन गरेका अधिकाँश चलचित्रहरु चाहे पारिवारिकमा घर संसार, बुवा आमा भन्नुस् चाहे लभस्टोरीमा मायाँ नमार भन्नुस् चाहे जीवन दाता, दादागिरी र दोश्ती जस्ता चलचित्रहरु सबैले ब्यवसाय गरेका हुन् । अहिले पनि कथा वस्तु, कलाकार र निर्देशकलाई उपयुक्त चलचित्र बनाउने बाटो प्रसस्त गर्ने हो भने पक्कै पनि चलचित्रले मुनाफा कमाउँछन् ।
दुई दर्जन बढी फिल्म निर्देशन गरिसक्नु भएको छ कथाबस्तु, आर्टिष्ट लगायत सबै पक्षबाट सन्तुष्टि मिलेको आफ्नै निर्देशन रहेको फिल्म कुन हो ?
धेरै छन् । तर, लभस्टोरीमा माया नमार, एक्शनमा दादागिरी र पारिवारिकमा बुवा आमा र घर संसार जस्ता चलचित्र अझै पनि यादगार चलचित्र बनेका छन् ।
सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ यो विषम परिस्थितिमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु भयो ?
पहिलो लकडाउनमा जति बढी सामाजिक सेवामा सक्रिय भूमिकामा देखा परें अहिलेको दोश्रो चरणको निषेधाज्ञाको बेलामा सचेतना अभिवृद्धि गराउने काममा लागियो र आफैं पनि केही समय बिरामी परेकाले अलि कम उपस्थिति रह्यो ।
बीचमा म्युजिक भिडियो निर्देशनमा सक्रिय हुनुभयो, फिल्म नपाएर हो ?
चलचित्र केही समय सामाजिक क्षेत्रको दौडाइमा लागेर नगरेकै हो । केही नयाँ प्रवेशीहरुलाई पनि दौडिन मौका दिनुपर्छ भनेर हो । तर, उहाँहरुका चलचित्रहरु पनि हेरियो । अब पुरानै निर्देशकहरुको खोजी भएर आइरकेको छ । त्यसैले आँधी तुफान २ गरेको हुँ । लकडाउनको उपज हो म्युजिक भिडियो निर्देशन बढी सक्रिय भएको चै तर पहिला पनि गरेकै काम हो ।
सिनेकर्मीमा गुटको चर्चा भैरहन्छ खासमा के हो, किन चाहिन्छ गुट ?
म गुट उपगुट भन्दा पनि राम्रो चलचित्र बनाउने काममै ध्यान दिन्छु ।
तपाईंलाई के लाग्छ अब सिनेमा क्षेत्र पुरानै अवस्थामा देख्न पाइन्छ ?
केही परिवर्तन त समय अनुसार हरेक क्षेत्रमा हुन्छ नै तर चलचित्र उद्योगको सवालमा पुरानो अवस्थामात्र होइन झन् त्यो भन्दा राम्रो अवस्थामा फर्किन सक्छ किन कि विश्व बजारमा पनि नेपाली चलचित्रहरु बिक्न थालेका छन् । तर, केही समय भने लाग्छ ।
टाढाको उदाहरण नलिउँ पाकिस्तानमा सिनेमा बन्दैन, बलिउड पनि सुस्ताएको अवस्था छ, यो के को संकेत जस्तो लाग्छ ?
मनोरञ्जन हरेक देशमा बिक्ने नै कुरा हो, पाकिस्तानमा त्यहाँको सरकारले लिएको नीतिले रोकावट गरेको वा प्रोत्साहन नगरेको भएर पनि नबनेको होला । तर, चलचित्र राम्रो र स्तरीय बनेमा चलेकै छ चाहे हलिउड, बलिउड भन्नुस् या नेपाली चलचित्रहरु नै । ठेक्का प्रविधि र सेटिङ प्रविधिमा बनेका चलचित्रहरलाई दर्शकहरुले चिन्छन् ।
अन्त्यमा समय सापेक्षिक आफ्नो भनाइ राख्नु पर्दा ...?
कोभिड–१९ बाट देश, विदेशमा रहेका सम्पुर्णले मुक्ति पाउन् । विस्तारै नेपाली चलचित्र उद्योगको भविष्य सुनिश्चित हुन पाओस्, राम्रा र स्तरीय चलचित्रहरुलाई सबै दर्शकहरुले माया र सद्भाव प्रदान गरुन् ।